Saripika infrared an'ny Przemysalw Kruk | Famoronana an-tserasera
Teknolojia mamela infrared dia teknika mamela izany sary iray amin'ny fampisehoana maivana izay eo anelanelan'ny 700 sy 1200 nanometera, izay tsy hitan'ny mason'olombelona. Ny fampiharana isan-karazany dia misy artista na siantifika.
Ary tamin'ny tranga voalohany nahitantsika ny sary infrared an'i Przemysalw Kruk izay tompon'andraikitra amin'ny ento aty aminay ireo sary mahafinaritra an'ireo hazo ireo izay namboarina tamin'ny fomba tsy mampino amin'ny tany poloney Sary iray afaka nametraka ireo hazo ireo ho tena mpiaro ny tontolo iainana misy azy ireo ary noho ny mason'i Kruk dia mamela antsika hifaly amin'ny fahitany.
Przemysalw Kruk dia mpaka sary miaina an-tsehatra amina mpizaha tany mipetraka any Poloney. Nandritra ny 20 taona dia naka sary ireo sary voajanahary nifanena taminy teny an-dàlana namakivaky ny taniny izy.
Ny fakantsary no tsara indrindra e mpiara-dia tsy afa-misaraka ary amin'ny fotoana ahafahany maka ireo sary infrared tsara tarehy izay mampiseho amintsika ireo sary ireo izay aseho amin'ny fomba miavaka sy miavaka ary majika ihany koa.
Kruk dia efa mahaliana ny sary infrared na teknika fakana sary infrared ary ao anaty kitapony izay ananany toerana anaovana azy ary amin'izany dia raiso ireo sary mahafinaritra zarainay aminareo rehetra amin'ity andro ity. Ny hazavana mamirapiratra sy ny mifanohitra avo indrindra dia mamela antsika hisambotra an'io tontolo manodidina antsika amin'ny fomba saika tsy manam-paharoa.
Araka ny nambarany, izao tontolo izao amin'ny alàlan'ity karazana sary ity misitery toy ny mistery izy io ary afaka manova ny fomba fijery manoloana zavatra ho an'izay mandinika na mankafy azy io. Afaka mahita azy amin'ny alalany ianao Facebook hanohy hahalala ny maka vaovao.
Sary manokana iray hafa avy amin'ny eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny hakanton'ny hazo manaitra ao amin'ny sary infrared an'i Przemysalw Kruk
Raha i Tim Burton no nitarika ny sarimihetsika Disney